हि’रासतमा रहेका प्रेमी विनयजंगलाई जीवनभर भएपनि कुर्ने प्रेमिका पुजाको जिकिर, ताजा कुराकानी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on हि’रासतमा रहेका प्रेमी विनयजंगलाई जीवनभर भएपनि कुर्ने प्रेमिका पुजाको जिकिर, ताजा कुराकानी ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
वे’रिसे ला’स व्यवस्थापन गर्दै आएका चर्चित अभियान्ता विनयजंग बस्नेत यतिबेला प्रहरी हि’रासतमा छन् । उनै बस्नेतले छोरी भन्दै आएका बिबिसीको एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना रोका मगरका बारेमा अन’र्गल कुरा गरेपछि उनी वि’रुद्ध उ’जुरी परेपछी उनि हि’रासत पुगेका हुन् ।सपनाले नै विनयजंग वि’रुद्ध उजुरी दिएकी हुन् ।
सधै यी दुवैले बुबा छोरीको साइनोमा आदर सत्कार गरेर बोले पनि बिबिसीको एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सपना परेपछि सपना र विनयको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । एक अन्तवार्तामा विनयले सपनाको अ श्लिल तस्वि र देखाइदिने ध म्की दिएपछि सपनाले विनय वि’रुद्ध उ जुरी दिए पछि विनयलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको थियो ।
सपनाले बस्नेत विरूद्ध अभद्र व्यवहारको मुद्दामा महानगरीय प्र हरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् । उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि भेटेर निवेदन दिएकी थिइन् । । यसै बिच विनयकी प्रेमिका भनिएकी पुजा मिडियामा आएकी छन् । उनले विनयलाई जीवनभर कुर्ने समेत बताएकी छन् ।
उनै पुजासंग गरिएको पुरा कुराकानी यहाबाट हेर्नुहोसः